क्योतो घुम्न आएका पर्यटकहरुको लागि ६ भरपर्दो र सस्तो ट्राभल पास | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > HOW TO > क्योतो घुम्न आएका पर्यटकहरुको लागि ६ भरपर्दो र सस्तो ट्राभल पास
क्योतो घुम्नको लागि निकै मनोरम सहर हो। क्योतो बिदेशी होस् या आन्तरिक पर्यटक दुबैको लागि निकै प्रसिद्ध छ। यसलाई अद्भुत बनाउने भनेको यहाँको ऐतिहासिक र संस्कृतिक झझल्को दिने ल्यान्डमार्क, मन्दिर, गुम्बा, बाटोहरु हुन्। त्यति मात्र नभएर क्योतोमा पूर्ण रुपमा भिजन किमोनो लगाएर हजुर हिड्दै क्योतोको सुन्दरतामा मन्त्र मुग्ध हुन सक्नु हुनेछ।तर घुम्न आएका सबैको एउटै प्रश्न हुन्छ। के क्योतो जना र घुम्न सजिलो अनि सस्तो छ ?
क्योतो घुम्ने थुप्रै अप्सन र तरिका छन्। धेरै भएकाले आफुलाई कुन स्किम ठिक हुन्छ भन्ने थाह पाउन निकै कठिन हुन्छ। कुनै कुनै स्किम त राम्रो भ्यालु नभएका हुन्छन। त्यस्ता स्किम लिएर ठगिएको महसुस गर्नु भन्दा सुरुमै राम्रो संग बुझेर मात्र प्लान गर्दा राम्रो हुन्छ। यी स्किमहरु मध्य एउटा हो साईट सीइंग पास। यदि हजुर क्योतो घुम्न जादै हुनु हुन्छ भने यो पास लिदा हजुरको पैसा बच्न सक्छ। यी पासहरु बस, ट्रेन, वा सबवेका हुन्छन। यी पासहरु १ वा २ दिने, १ हप्ते हुन्छन र कुनै कुनै ले त क्योतोको नजिकको अर्को ठुलो सहर ओसाका सम्म जना मिल्ने हुन्छ।
यदि हजुर क्योतो जादै हुनुहुन्छ र भरपर्दो साईट सीइंग पासको ’boutमा जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने यो लेख हजुरहरुको लागि हो। हजुरहरुलाई आज क्योतोमा लिन मिल्ने ६ भरपर्दो पासहरु ’bout बताउनेछु। तल उक्ल्लेखित पासहरु वर्ष दिन भरि लिन पाइन्छ। यी पासले हजुरलाई समय र पैसा को बचत गराउनेछन् अनि अनावस्यक झन्झट बाट पनि बचाउनेछन्।
1. कान्साई वान पास
यो पासमा के हुन्छ अनि के हुदैन
कान्साई वन पासले हजुरलाई कान्साई क्षेत्रका IC PiTaPa ICOCA मार्क भएका प्रमुख ट्रेन र बसहरु प्रयोग गर्न मिल्छ। हजुरले यो कार्ड अरु कम्युटर पास जस्तै चार्ज गर्नु पर्ने हुन्छ। यो पास देखाउनु भएमा हजुरले क्योतोको विभिन्न पर्यटकीय ठाउमा छुट र गिफ्ट पाउनु हुन्छ।
यो पास अन्य कम्युटर पास जस्तै भएकोले एकचोटी चार्ज गरेर अनलिमिटेड राईड भने पाइदैन। एक चोटी चार्ज गरेपछि टिकेट लि रहनु पर्ने झन्झट हुन्न। कार्डमा पैसा नसकुन्जेल प्रयोग गर्न मिल्ने भएकोले हजुरले सजिलो संग यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।
२००० यन (५००यन डिपोजीट, १५०० यन ई-मनि, यो कार्ड चाडै हट्दै छ )
३००० यन (५०० यन डिपोजिट, २५०० यन ई-मनि)
यो कार्ड कहाँ पाईन्छ
यो कार्ड थुप्रै ठाउमा किन्न पाइन्छ। यो कार्ड कान्साई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, सिन-ओसाका स्टेसन, र ओसाकाको सबवे र बस इन्फोरमेसन डेस्क मा लिन पाईन्छ।
थप जानकारीको लागि–> Kansai One Pass.
२. कान्साई थ्रु पास KTP
यो पास कान्साईको सबवे, बस र प्राईभेट रेल्वेमा चल्छ। यो पास क्योतो, ओसाका, नारा, ह्योगो र कान्साईको अन्य क्षेत्रमा चल्छ। यो पास निम्न सर्भिसहरुमा चलाउन मिल्छ: क्योतो सिटि बस, क्योतो बस, क्योतो केइहान, बस, केइहान कोचु, क्योतो सिटि बस, हान्क्यु रेल्वे, केइहान ईलेक्ट्रिक रेल्वे, केइफ़ुकु रेल्वे, एइजान एलेक्ट्रिक रेल्वे।
यो पास JR जापान रेल्वे लाईनको ट्रेनमा भने चल्दैन।
मूल्य र कस्तो पर्यटकलाई यो पास लिदा ठिक
५२०० यन (३ दिन पास)
४००० यन (२ दिन पास)
यो पास क्योतो केहि दिन बस्ने र क्योतोको बाहिरी ठाउमा घुम्न जाने मानिसको लागि ठिक हुन्छ। यदि हजुर क्योतोमा धेरै सार्बजनिक सवारी प्रयोग गर्नु हुन्छ भने यो पासले हजुरको धेरै बचत गराउनेछ। यदि हजुर क्योतो एकदिनको लागि मात्र जादै हुनु हुनेछ भने यो पास भन्दा अरु अप्सन राम्रो हुन्छन।
कहाँ किन्न पाईन्छ ?
यो पास विभिन्न पर्यटक इन्फोरमेसन सेन्टरमा पाईन्छ अनि कान्साई एरपोर्टको क्षेत्रमा पनि पाईन्छ। पुरै लिस्ट्को लागि यहा क्लिक गर्नुहोस्। यो पास लिनको लागि पासपोर्ट भने अनिवार्य चाहिन्छ।
KTP को अफिसियल वेबसाइट .
३. क्योतो सिटि बस १ दिने पास
यो पास मा के के हुन्छ अनि के हुदैन
यो पासले हजुरले क्योतोमा एक दिनको लागि अनलिमिटेड बस यात्रा गर्न सक्नु हुनेछ। यो पास २४ घण्टा नभएर हजुरले किन्नु भएको दिन मात्र चल्छ। त्यसैले यो पास सकेसम्म बिहान लिनुस। यो पासमा ट्रेन, सबवे वा क्योतो बाहिर को यात्रा भने गर्न मिल्दैन।
६०० यन (बयस्क ) ३०० यन (बालबालिका)
यो पास क्योतो एकदिनको लागि घुम्न आउने पर्यटकहरुको लागी राम्रो पास हो। क्योतोको बसहरु रेगुलर हुने र मुख्य पर्यटकिय स्थलमा जाने हुनाले यो पासले हजुरको पैसाको राम्रो बचत गराउने छ। क्योतोमा बस यात्राको २३० यन पर्छ, त्यसैले हजुरले यो पास लिएर तीन चोटी बसको यात्रा गर्नु भयो भने पैसा जोगाउनु हुनेछ।
यो पास बसहरुमा तु किने त्यहि बेला बाट चलाउन मिल्छ। यो क्योतोको हरेक सबवे स्टेसनको टिकेट विन्डोमा पनि लिन मिल्छ।
४. क्योतो सबवे, बस पास
यो पास एक वा दुई दिनको लागि चल्छ। यो क्योटो सिटी बस, क्योटो बस, र क्योटो सिटी सबवेमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पास देखाएमा केही स्थानहरूमा छुटहरू र प्राथमिकता पनि पाइन्छ। स्थानहरूको संख्या 2-दिनको पासमा अलि बढी हुन्छ।
क्योतोमा केहि बस मार्गहरू छन् जुन यो पासमा समावेश गरिएको छैन, तर ति बस हजुरले पर्यटक स्थलहरूको लागि लिनु हुने छैन।
900 येन वयस्कको लागि, बच्चाहरु को लागि 450 यन (1-दिने )
1,700 येन वयस्कको लागि, बच्चाहरु को लागि 850 यन (2-दिने)
यो पास क्योतोमा बस र सबवे ट्रान्सफर गरिरहने पर्यटकको लागी निकै उचित पास हो। दुइ तीन चोटी को बस र ट्रेनको यात्राले नै हजुरले पैसा जोगाउनु हुनेछ।
यो पास हजुरले क्योतो स्टेसन, सबवे स्टेसन र क्योतो सिटि बस म्यानेजमेन्टको इन्फोरमेसन सेन्टरमा पाउनु हुनेछ।
५. क्योतो सबवे १ दिने पास
यो पास हजुरले क्योतो सबवे एकदिनको लागी जति चोटी पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ। तर यो पासमा बस, JR लाईन प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यसै गरि किन्तेचु र केइहान ट्रेन लाईन पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन।
मूल्य र कस्तो पर्यटकलाई यो पास लिदा ठिक ?
यो पास क्योतोको भित्रि शहर घुम्न मन पराउने व्यक्तिहरूको लागि उचित हुन्छ। यो पास विशेष गरी शहरी केन्द्र, किनमेल र क्योतोको नाइटलाइफ हेर्न चाहनेहरूको लागि राम्रो छ। क्योतोको सबै पर्यटकीय स्थलमा सबवे नजाने भएकोले अरु सवारी साधन पनि प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।
यो पास क्योतो सबवे स्टेशनहरुमा राखिएको हुन्छ। कृपया यसलाई खरीद गर्नु अघि सबवे मार्ग नक्सा जाँच्नुहोस् ’cause तपाईंले भ्रमण गर्ने पर्यटक आकर्षणहरूमा यो पासले जान नमिल्ने हुन सक्छ।
क्योतो सबवे १दिने पासको वेब साईट.
६. केइहान १ दिने साइटसीइंग पास
यो एक विशेष पर्यटकीय स्थल पास हो र यसमा निम्न आकर्षणहरूमा रेल यात्रा समावेश गरिएको छ; कामोगवा नदी, गायन, किओमीजु मन्दिर, टोफुकु-जी, फुसिमी अनारी, र फुजुइनोमोरी। यो पासले बस र अन्य ट्रेनको यात्रा गर्न मिल्दैन। अनि माथि उल्लेखित भन्दा बाहिरको पर्यटकिय स्थल पनि यो पासले जान मिलदैन।
क्योतोको लागि 600 यन
क्योतो र ओसाका को लागि 800 यन
२ दिने पास १२०० यनमा पाईन्छ
यो पास विभिन्न टिकेट अफिस र केहि होटेलहरुमा पनि लिन सकिन्छ। पुरा जानकारीको लागी तलको लिंक हेर्नु होस्।
केइहान साइटसीइंग पास वेबसाईट
यी क्योतो घुम्ने ६ प्रमुख र भरपर्दा पासहरु हुन्। यी पासहरु हजुर को क्योतोको बसाईको लम्बाई र हजुर घुम्न चाहने स्थल अनुसार विचार गरेर लिनु भयो भने समय र पैसा दुबैको बचत गर्नु हुनेछ। आशा गर्छु यो लेखले हजुरले आफुलाई ठिक हुने पास छान्न सहयोग हुनेछ।